Qalabka Keydhka 'AirTag giraanta-qaabeeya' ayaa umuuqda inuu daadanayo | Waxaan ka socdaa mac
Xarig-giraanta AirTag giraan-faneedkeedu wuxuu u muuqdaa mid daadanaya
Waxaan ka hadlaynay Apple AirTags iyo soo bandhigiddeeda in ka badan ee suuragalka ah ee sanadkan. Xaaladdan oo kale, sawir ayaa lagu muujiyey xagga sare kaas oo nooc ka mid ah giraan qaab foomka furaha ahi u muuqdo mid si fudud u noqon kara kaabayaasha furaha.
Maanta shaki la'aan waxay noqon kartaa maalintii la bilaabay waana in dhammaan sharadka lagu daro AirTags oo ah mid ka mid ah aaladaha aan maanta ku arki doonno Mac-yada cusub ee wata Apple Silicon. Apple ayaa gacanteeda ku jirta inay soo saarto qalabkan iyo inkale waxaana macquul ah inuu ugu dambeyn si fudud ku dhamaado sababo la xiriira isbedelka wararka xanta ah iyo daadinta.
Tweet-ka bogga "Choco_bit" waxay muujineysaa xarig furahaas oo lamid ah rukhsadda Apple-ka taas oo run noqon karta saacadaha soo socda, waan arki doonaa waxa dhaca.
Awoodda AirTag ee ku xiran qalabka Saddle Brown.
Waxay u egtahay wax badan sida shatigan horey loo soo sheegay, laakiin ku qaado xoogaa milix ah madaama tan iyo wax la mid ah si fudud loogu soo saari karo Shiinaha. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu
Waxa aan ku cadeynay waa in AirTag-yadaan in badan lagu xamanayay maantana aan haysanno hal fursad oo dheeri ah oo aan ku eegi karno in la soo bandhigay iyo in kale. Xusuusnow in aaladda noocan ahi ay ku xirmayso Bluetooth-ga iPhone-keena oo noo oggolaanaysa inaan helno inta ay ku dhex jirto ficillada bulshadaas. Furayaasha, boorsada jeebka, boorsada, iwm., Aad bay faa'iido u yeelan kartaa, laakiin ma wajaheyno wax soo saar ballaaran sidoo kale tan iyo markii loogu talagalay nooc gaar ah oo isticmaale ah.
Waan arki doonaa waxa Apple ugu dambeyn ku sameeyo iyaga, haddii ay soo bandhigaan maanta ama ay sugaan dhacdo kale oo 2021 ah oo aan sidaa u sii fogayn. Waxa aan arki doonno maanta waa Mac-yada cusub ee wata processor-ka A14, waxa aan sugeyno!
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Xarig-giraanta AirTag giraan-faneedkeedu wuxuu u muuqdaa mid daadanaya
Apple Silicon on Macs macnaheedu maahan in dhammaan barnaamijyada macruufka ay ku shaqeyn doonaan Mac
Kuwani waa siyaabaha loo xoojiyo dhacdada Apple galabta markay tahay 19:00 fiidnimo.